_Incwadi yezinkuni_. I-Nordic Bestseller Yamuva Emangazayo | Izincwadi Zamanje
Incwadi yezinkuni. Ngakho-ke, ngaphandle kokuqhubeka kuchume noma izimfihlakalo. Umbhalo ongezansi Impilo ehlathini akuyona nokuzenzisa. Umbhali, umbhali waseNorway ongaziwa (kuze kube manje) ogama lakhe ULars Mytting, ishanela yonke iplanethi ngalesi sivumelwano sokhuni, noma kunalokho, kubuciko bokusika izinkuni. Kungaba njalo ukuqina ngokwengeziwe nokwangempela ngokubheja emcabangweni onjalo ukuze ugqame futhi udle imakethe yokushicilela?
Mhlawumbe amanye amagama amakhulu ezincwadini zeNordic kufanele amangale (noma cha) lapho kushaywa khona uMytting, intatheli eyazalwa ngo-1968, owayesebhale amanoveli amathathu. Le ncwajana yemiyalo nengoma yokuphila okulula emvelweni selithengisile emhlabeni wonke amakhophi ayisigamu sesigidi futhi ihunyushelwe ku- Izilimi ezingama-16. Sihlaziya lo mkhuba othengiswa kakhulu.
Kuthiwani uma ngibhala incwadi ngalowo muzwa, incwadi lapho abagawuli bemithi besho izintshisekelo nezifiso zabo, kepha kungabonakali njengombono wokugabadela womuntu wasedolobheni njengami, kodwa into umakhelwane wami angafuna ukuyifunda?
Lokho kushiwo ngelinye ilanga nguLars Mytting (Fåvang, 1968) futhi wafika kukho. Umphumela, Incwadi yezinkuni, okungajwayelekile (okungenani) ukuphatha ngobuciko bokusika izinkuni, ibhukwana lokufundisa nezeluleko ngezihlahla nalezo zinhlobo ezahlukene zezinkuni. Kepha futhi nokuphathwa koku ukuzindla ngemvelo yokusinda nokudumisa impilo ehlathini. Futhi waphumelela ekuheheni ukunakwa.
Impumelelo yokuthengisa engalindelekile ekwethulweni kwayo kwezimakethe ikwenze kwaba yi isihloko senkomba yenhlangano okuya ngokuya kwanda: omunye wabaphathi abajwayelekile bokubuyela esimweni semvelo, kulokho okubizwa "ngempilo ethule." Ngakho-ke, ama-geek amaningi endaba avula amakhasi awo futhi angacishe anuke iphunga lehlathi, umhlaba, utshani nezihlahla. Nokuthi izinkuni zokubasa ezikhetheke kakhulu abasanda kusika ngomzamo onamandla nokuvuselela ngembazo yabo esebenza kahle kakhulu.
1 Izinkuni, izihlahla, ihlathi, ukuthula ...
2 Ama-echoes weThoreau
3 Impumelelo engachazeki?
Izinkuni, izihlahla, ihlathi, ukuthula ...
Indaba elula, elula nepholile ingatshelwa kahle ngumuntu owazalelwa, wakhulela futhi wakhulela kwelinye lamazwe eligcwele kakhulu imithombo yemvelo yokulwa namakhaza ahlala ekhona.
Kulezo zingxenye ezisenyakatho ubusika njalo ukuza kwayo. Futhi ukusetshenziswa kwabo kwezinkuni akukanciphisi i-iota eyodwa, yize amaNorway engashodi ngoyela. Kepha bayaqhubeka nokudla, lapho kuphela, cishe ama-300 kilos emndenini ngamunye. Kusikwa uhhafu walezo zinkuni ngqo ngokwabo. Ukusuka lapho kwafika i- umqondo kuya ku-Mytting.
Ngelinye ilanga wabona a umakhelwane osekhulile futhi ogulayo ophuma njalo ekuseni ayobona izinkuni zokubasa okwakudingeka ukuthi yome ngaphambi kokuyisebenzisela lobo busika. Ku-Mytting kwakubonakala sengathi kuyisiko lekusasa umakhelwane wakhe angase angabe esabona. Futhi ngicabanga isingathekiso sobudlelwano bomuntu nokhuni njengokulahleka kwangempela nokulula kulesi sikhathi esimakwe ngokushesha kanye nobuchwepheshe.
Ukuqamba amanga funa ukuzenzela izinto. Sikumema ukuthi ungene esikhunjeni salowo ogawula izinkuni osebenzisana ubuso nobuso nesidalwa sokhokho esimele izinkuni. Isikhomba kanjani emlilweni nasemandleni ayo ngezinkulungwane zezincazelo ezifana nokufudumala noma induduzo.
I-Mytting ifaniswe ne-classic ye-XIX, Henry David Thoreau. Imbongi yaseMelika, isazi sefilosofi, umlobi wezindaba nezemvelo uveze impilo yakhe phakathi neminyaka emibili emvelweni emsebenzini wakhe Walden. Kepha-ke, kufanele uvale amabanga esikhathi, umcabango nezimo.
Ngokusobala akunjalo. Kukhona abafundi bakho konke ukunambitheka nokuzwela. Uma ungumuntu wasedolobheni ongenathemba futhi ongumlutha womsindo, ungahle ungakhangwa yile ncwadi. Kepha abathandi bejubane lokuphumula nokuhlangana nemvelo bayakujabulela ngenjabulo engakhulumeki.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » _Incwadi yezinkuni_. I-Nordic Bestseller yakamuva emangazayo
Ababhali abangama-65 basayina incwadi ephikisana noDonald Trump